मेरी कुसुमको अमूल्य मायाका नाममा – Dcnepal
मेरी कुसुमको अमूल्य मायाका नाममा
प्रकाशित : २०७६ फागुन २ गते १०:१५
मेरो जीवन यात्राकी सहयात्री कुसुम
तिमीलाई सम्बोधन गर्नका लागि मसँग अनेक उपमाहरु छन तर पनि तिम्रो मायाको दायरालाई साँघुरो नबनाइकन भन्दै छु ‘मेरो जीवन यात्राकी सहयात्री ।’
हो, मेरो लागि तिमी खास सहयात्री हौ । म ढल्नै लाग्दा हात दिएर सँगै हिँडाउने, म डराएको बेला ढाडस दिने र बाटो बिराउनै लाग्दा पथ प्रदर्शक बन्ने तिमी त हौ । तिमीले यस्तो अमूल्य माया दिएकी छौ नि, जुन हीरा, मोती, जवाहरातसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । यही कारण तिमी मेरो संसार हौ । तिमी फूलको सुगन्धमा छौ । जुनको शितलतामा छौ । पहाडको खोलामा बगेको कलकल पानी हौ तिमी । अनि बिहानीको शीतमा टल्किएको घामको किरण पनि ।
प्रिय कुशुम, तिमीसँग बिताएका १४ बर्षका अनुभव र अनुभुतिहरु हृदयको पानपाते पानामा कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसेको छु । यी १४ बर्षहरु बितेको पत्तै भएन । हामीलाई १४ बर्षे ‘पूराना जोडी’ बन्नु परेको छैन किनकि हामी ’प्रेमी प्रेमिका’ । हाम्रो मायाको भब्य सिंहासनमा तिमी बिराजमान छौ । त्यहीँबाट मायाको शासन ब्यबस्था संचालन गरिरहेकी छ्यौ ।
कहिल्यै पुरानो नहुने हाम्रो काहानीलाई किन–किन सम्झन मन लाग्यो । हाम्रो प्रेम बीज अंकुराएको समयको कुरा गरेर तिमीलाई चिमोट्न मन लाग्यो । यस्का लागि अधिकार दिन्छौ नि ?
अनगिन्ती सपना बोकेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं छिरेको गाउँले म । घरहरु बाक्लिँदै र सम्बन्धहरु पातलिँदै गैरहेको काठमाडौंलाई चिन्न सजिलो थिएन । तर पनि जीविकोपार्जन गर्न आवाजको खेती गर्न थालें । कुशुम, तिमीलाई थाहा छ असारको ५ गते बिहान जव तिमी मलाई नै भेट्न भनी रेडियो स्टेशनको कार्यालयमा आयौ नि त्यस दिनलाई म कहिल्यै भुल्न सक्दिन । तिमी मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने उद्देश्यले आएकै थिएनौ । न म प्रेम प्रस्तावको विज्ञापन गरेरै बसेको थिएँ । तर परिस्थितीले नयाँ मोड लियो ।
तिमीले लगाएको नीलो रंगको कुर्ता सुरुवाल, अग्लो र सलक्क परेको ज्यान, गाजलु आँखा, हँसिलो अनुहार, मधुर मुस्कान… किन किन तिम्रो बारे केही सोच्न पो थालेछु । दिनहरु बित्ने क्रम रोकिएन । त्यस पछि त हाम्रो नियमित कुरा हुन थाल्यो । मेरो मुटुलाई छिया–छिया बनाउने तिमीप्रति थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखियो । अनुसन्धानबाट थाहा भयो तिमी त मेरा हरेक कार्यक्रमहरु नछुटाइकन सुन्ने शुभचिन्तक पो रहेछौ । अब थप केरकार गर्नै परेन । यसरी पहिलो भेटबाटै तिमीले मेरो मुटु चोर्यौ । हामीलाई थाहा छैन कस्ले राख्यो पहिलो प्रस्ताव अनि कस्ले दियो त्यस्को जवाफ ।
तिमी गीत गजल गुन्जाइदिन अनुरोध गर्थ्यौ । म सुनाउँथे डा. कृष्णहरि बरालको गजल
तिमी मसँग भैदिए जे सुकै आँट्न सक्छु म
हेरेर तिमीलाई नै जिन्दगी काट्न सक्छु म
यसरी थाहा नपाई एक अर्का बिना बाँच्न असम्भव ठान्न थालेछौ । हो कुशुम, आकाशबाट तारा खसेको बेला तिम्रो नाम लिन थालेछु । तिम्रै मात्र कुरा गरिरहौं लाग्ने पो भैसकेछु । तिम्रो र मेरो सम्बन्ध हात र आँखाको जस्तो भएछ । आँखा रसाउँदा हातले पुछिदिने, हातमा चोट लाग्दा आँखा रोइदिने ।
दिन प्रतिदिन यति प्रिय बन्दै गयौ नि
तिमीलाई हेरेर न आँखा नै थाके,
तिमीलाई सोचेर न दिमाग थाक्यो,
तिमीलाई सम्झेर न मन नै थाक्यो ।
जति हाम्रो माया प्रगाढ बन्दै गयो त्यति नै हाम्रा अगाडि समस्या र अबरोधका पहाडहरु चुलिदै गए । म कञ्चनजंघाको फेदीको क्षेत्रीको छोरो तिमी काठमाडौं नजिकैको सुन्दर गाउँकी ब्राह्मणकी छोरी । हामी भन्थ्यौ ‘प्रेममा जात हेरिँदैन, भौगोलिक परिस्थितिले कुनै अर्थ राख्दैन, धनी गरिबको पर्वाह राखिदैन ।’ तर समाज त्यसको विपरित तर्क गर्छ । तिमीसँगको प्रेम सम्बन्ध एक कान, दुई कान हुँदै मैदान हुनै लागेको थियो । हाम्रो प्रेमलाई छुटाउने चर्चा पनि सुन्न थालियो । हामी एक भएर जीवन जिउन लगभग असम्भव जस्तै बनेको थियो । त्यो अशुभ खबर लिएर नयाँ बानेश्वर आएको दिन हामी कति रोयौं है । आमा बुवा र सिंगो परिवार छोरीको निर्णय नै सर्वोपरी ठान्ने तर समाज चाँही …।
इटलीका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनले भने जस्तै अनुशासनको दायरा भित्र हुने प्रेम र आकर्षणमा ईश्वर पनि खुशी हुँदा रहेछन् । अनवरत रुपमा बगेको पानीले विशाल चट्टान पनि खियाउन सक्छ भनेझै हाम्रो निश्छल प्रेमको अगाडि कसैको केही लागेन । ‘जीवन हो सामान्य आँधी हुरी त चलिरहन्छ तर डराउनु हुन्न’ तिमी भन्ने गर्थ्यौ ‘एक अर्काको दरिलो साथ भएमा काँडा बीच पनि फूल फूलाउन सकिन्छ ।’ हो कुशुम, तिम्रो दरिलो साथले असम्भव कुरा पनि सम्भव बनाएरै छाड्यौ ।
भेट भएको करिव नौ महिना पनि नबित्दै फेब्रुअरी १४ अर्थात प्रणय दिवसकै दिन हामी युगल जीवनमा प्रवेश गर्यौ । शालिनदीमा किनेको पवित्र सिन्दूर, हाम्रो पहिलो र नियमित डेटिङ स्पट सिद्धपोखरीमा पुगेर तिम्रो सिउँदोमा पहिर्याउदा यस्तो लागेको थियो नि, हामीले विश्वयुद्ध जितेका छौ । त्यो बेला पोखरी नजिकै रुखमा रहेका चराचुरुङ्गीहरु अती खुशी भएका थिए । सिद्धपोखरीमा रहेका माछाहरु पनि हाम्रो मिलनमा औधी रमाएका थिए । त्यसो त हाम्रा लागि मान्छे भन्दा नजिक तिनै माछाहरु र चराचुरुङ्गीहरु थिए । उनीहरुले हामी रुदा सँगै रोएका थिए र हाँस्दा र चल्दा लजाएका थिए ।
प्रिय कुशुम, युगल जीवनको मुख्य मेरुदण्ड नै विश्वास रहेछ । १४ बर्षमा धेरै कपडाहरु फेरिए । १४ पटक नै रुखले पालुवा फेरे । तर हामीमा कुनै परिवर्तन भएन र हुने छैन । एक रथका दुई पाङग्रा बनेर परिवारलाई पहिलो प्रथमिकतामा राखेर यात्रा गर्दा कम्ता आनन्द आउछ नि त्यो बर्णन गर्नै सकिन्न । तिमी भन्छौ नि हौसला हुनु पर्छ जीवन कुनै पनि बेला फूल्न सक्छ । यस्तै उर्जाशील कुरा गरेर मेरो काममा सहयोग गर्ने तिमीलाई हृदयदेखि नै सम्मान छ । कुशुम तिम्रो जति प्रशंशा गरे पनि म कहिल्यै थाक्दिन । किनकि तिमी पूर्ण महिला हौ । त्यसो त हामी दुईमध्ये अलि केयरलेस मै छु । यस्तो बेला मायालु तवरले तिमीले सम्झाउदा साँच्ची खुशी लाग्छ । शायद कमैले पाउलान तिमी जस्तो मायालु जीवन संगीनी ।
कुशुम, जीवनका लागि अति आवश्यक तत्व भनेकै प्रेम रहेछ । जुन कुरा हाम्रो जीवन भोगाइबाट सिकेका छौ । निश्छल र निष्कपट प्रेम गराइले सफलता त प्राप्त गर्यो । तर जीवनमा समस्याहरुले छोड्दै छोडेनन् । कहिलेकाहीँ सोच्छु हाम्रो जीवन कथालाई आधार मानेर चलचित्र बनाउने हो भने कति चर्चित हुन्थ्यो होला है । ‘युगल जीवनको हनिमुन पिरियड पनि बित्न नपाउदै देशको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठूलै आन्दोलन भयो । जुन १९ दिने आन्दोलनका नामले परिचित छ ।
जागिरे संस्थामा समाचार बन्द भयो । जागिरबाट पनि झण्डैले हात धुनु परेको थियो । सञ्चित रकम सकिनै लागेको थियो । काठमाडौं भरी खाद्यान्नको हाहाकार चलिरहेको थियो । यति नै बेला खाना पकाउने ग्याँस सकियो । कुशुम, त्यो साँझ खुत्रुके फोरेर ग्याँसको सिलिन्डर किन्नका लागि चानचुने पैसा गन्दै गर्दा हामी दुईका आँखाबाट खसेका आँसु सम्झँदा पनि भक्कानो छुटेर आउँछ ।
कुशुम, यस्ता अनगिन्ती पीडा र समस्याहरुले जीवन जिउन सिकाएको छ । दुःख र अभावका पहाडहरु हुँदैन थिए भने हामी सन्तुष्टिका टाकुरामा कसरी पुग्थ्यौ होला र ? शिशिरलाई भोगेकै कारण हामी बसन्तमा रमाइरहेका छौ ।
कुशुम, तिमीले मेरा लागि धेरै कुरा त्याग गरेकी छौ । आफ्ना आफन्तहरु त्यागेर आएकी छौ । सँग–सँगै हाँसे खेलेका साथीहरु खुल्ला आकाशमा चरीझैं स्वतन्त्र रुपमा उडिरहेको बेला १७ बर्षको उमेरमा युगल जीवनमा बाँधियौ । आफ्ना सारा परिचयहरु विलिन गराएर मेरा नामका सारा चिजहरु अंगीकार गरेकी छौ । आँसुहरु लुकाएर खुशी मात्र हुन जानेकी छौ । हरेक दिन झुल्कने घामको किरण भन्दा उज्याली मेरो मनको दरबारकी रानी हौ तिमी ।
हामी वर्तमानमा जति रमाएका छौ त्यति नै भविष्यका लागि योजना बनाउनु छ । हाम्रो उत्कृष्ट प्रेमका निशानीहरु स्वदेश र सूचनाका लागि फराकिला बाटाहरु बनाउनु छ । तिमी मेरो ओठको मुस्कान हौ । मलाई भोक, निद्रा, थकान भन्दा पनि तिम्रो चिन्ताले सताउँछ । म चाहन्छु मलाई खुशी दिने मेरी माया सधैं खुशी हुनुपर्दछ । हाम्रो माया पारिजात जस्तै बनोस हेर्दा सामान्य तर महत्व असीमित ।
उही तिमीलाई सयौ जुनीसम्म माया गरिरहने